Wax ka ogow lixda dal ee tirada maxaabiista ku jirta jeelashoodu labanlaab ka badan tahay…… | Qaran News
Wax ka ogow lixda dal ee tirada maxaabiista ku jirta jeelashoodu labanlaab ka badan tahay……
Writen by Qaran News | 3:22 am 14th Oct, 2021
Ecuador xitaa kuma jirto “10 ka dal ugu sarreeya” waddamada Laatiin Ameerika iyo Kariibiyaanka ee ugu xabsiyada badan.
Waa maxay sababta dalalkan, iyo guud ahaan Koonfurta Ameerika, ay u qabaan dhibaato ba’an oo maxaabiista ku jirta? Khubaro la hadashay BBC Mundo ayaa xaqiijisay, in kasta oo ummad kasta ay leedahay dhibaatooyinkeeda, haddana waxaa jira dhowr arrimood oo wax ka tara.
“Waxaan ognahay in xabsiyada badan ee la dhisay, in la buuxin doono.
“Garsoorayaasha waxaa saaran cadaadis arrintan la xiriira” ayuu yidhi Sacha Darke oo ah borofisar ku takhasusay dambiyada ee Jaamacadda Westminster UK oo darsay nidaamyada xabsiyada ee UK iyo Latin America. Darke wuxuu aaminsan yahay in dhibaatadu aysan ahayn tirada xabsiyada, laakiin tirada maxaabiista.
Wuxuu xusayaa in tirada maxaabiista ee aagga ay saddex laabantay tan iyo 2000, wuxuuna ugu yeeraa Koonfurta Ameerika “xero uruurin oo cusub.” “Wuxuu dhex mari doonaa Waqooyiga Ameerika,” ayuu yidhi, isaga oo ula jeeda dadka ugu xabsiyada badan dunida.
” Maanta Maraykanku waaa dalka haya tirada ugu badan ee maxaabiista adduunka (in ka badan 2 milyan), tirada maxaabiista ee dadkana waa (629 maxbuus 100,000 qofba).
“Dhibaatada ugu weyni waxay ka jirtaa nidaamka caddaaladda ee ma aha nidaamka xabsiyada kaasoo aan go’aaminaynin qofka inta xabsiga lagu haynayo” ayuu yidhi César Muñoz oo ah cilmibaadhe sare oo ka tirsan xafiiska Koonfurta Ameerika ee hay’adda xuquuqda aadanaha u dooda ee HRW oo BBC Mundo la hadlay. Muñoz ayaa farta ku fiiqay laba cilladood oo xagga garsoorka ah: dib u dhac iyo “adeegsiga xaddhaafka ah” .
“Maanta mid ka mid ah sababaha ugu weyn ee xabsiga loogu jiro waa ka ganacsiga daroogada,” ayuu yiri Darke. “Laakiin inta badan dadka la xiray ma aha kuwa ka ganacsada maandooriyaha, laakiin waa dhallinyarada noqota dilaaliin isku xira kuwa wax iibiya iyo kuwa iibsada,” ayuu yiri, isagoo ula jeeda waxa loo yaqaan “iibinta daroogada.”
“Koonfurta Ameerika, qof kasta oo iibiya daroogada waxaa loogu yeeraa ganacsade, laakiin Yurub waxay u yeeraan kuwa ugu sarreeya oo keliya,” ayuu yidhi. Aqoonyahan Ingiriis ah ayaa tilmaamay in tafaariiqda dalkiisa – oo sidoo kale loo yaqaanno ganacsiga yaryar – aan lagu ciqaabin xabsi, taasina ay tahay sababta “tirada maxaabiista ee Koonfurta Ameerika ay aad uga yar tahay Yurub.
“Waa wax soo saar la’aan in xabsiyada laga buuxiyo dad lagu qabto iyagoo daroogo ku iibinaya jidadka,” ayay tidhi HRW oo ah hay’ad u doodda xuquuqda aadanaha.
“Ku rididda dadkan ha ahaato mid xidhan ama xukun xabsiyada ay gacanta ku hayaan kooxaha dambiilayaasha ah ayaa ugu dambeyntii wiiqaysa amniga guud maxaa yeelay waxay ku jiri doonaan jaamacadaha dambiyada dhabta ah,”.
Buuggooda “Xabsiyada iyo Dambiyada Laatiin Ameerika”, oo la daabacay sannadkan ayaa aqoonyahannada Gustavo Fondevila iyo Marcelo Bergman waxay ku tilmaamaan xabsiyada kuwo “aan waxtar lahayn,” xayndaabyo iyo hagaajiyayaasha rabshadaha iyo dambiyada “.
“Khubaradu waxay ka digayaan in cidhiidhigu door weyn ka ciyaaro korodhka kooxaha dambiilayaasha ah. Sababta oo ah waxaa jira xakameyn dowladeed oo kooban”ayuu yidhi Muñoz. “Markaa buux dhaafku wuxuu sii hurinayaa korodhka kooxaha dambiilayaasha ah.”
“Xabsiyada ayaa ah arin aad muhiim ugu ah shabakadahan,” ayuu intaa ku daray. Dhab ahaantii gobolkan waxaan ka jira kiisas badan oo ah budhcadda dambiilayaasha ah oo laga sameeyay xabsiyada ka dibna ku hawlan ganacsi sharci darro ah oo ka baxsan xabsiyada,” ayuu yidhi isagoo tusaale u soo qaatay ururka dambiyada ugu weyn Brazil ee magaciisa loo soo gaabiyo (PCC).
Darke, ayaa dhankiisa ku doodaya in dalal badan saraakiisha xabsiyada “ay u baahan yihiin kooxo si ay u abaabulaan hawlgallada xabsiga”
“Meelaha qaarkood kooxahan waxaa magacaaba nidaamka xabsiga si ay u ilaaliyaan nidaamka,” ayuu yidhi. Wuxuu ku sheegay qaabkaa “dowlad iskaashi.”
“In kasta oo aysan siinayn agabkii nidaamka xabsiga oo aysan lahayn shaqaale looga baahnaa haddana waa wax iska caadi ah in dadka halkaas ka shaqeeya iyo kuwa aan maamuli karin xabsiga ay raadsadaan wadashaqeynta maxaabiista,” ayuu sharxayaa.
Su’aahsu waxay tahay hadba maxaa xal u ah meertadan foosha xun marka laga reebo ka hortagga dembiyada sii socota? “Waa inaad maal gelisaa ka hortagga dembiyada halkii aad wax ka qaban lahayd dembiyada,” ayuu ku taliyeey Muñoz. “Waa isbeddel xagga fikirka ah oo asaas u noqon doona Koonfurta Ameerika.”